Ungasusa njani i-cache yezicelo kwi-Android | I-Androidsis
Ungayicoca njani i-cache yezicelo kwi-Android
UAron Rivas | | Tutorials
Ngaphandle kokuba siyiqaphele, imemori yesixhobo sethu se-Android inokugcwalisa, nangona singafaki usetyenziso olutsha, ukhuphelo lomculo, iifayile, imifanekiso okanye enye into. Kodwa kutheni le nto? Ewe, esona sizathu siphambili kukuqhutywa kwezicelo zeselfowuni. Ngalo lonke ixesha sivula sibaleka iifayile zexeshana zihlala zenziwa zithatha indawo kwimemori yesixhobo; ezi zigciniwe.
Kule posi sichaza Ungasusa njani i-cache yezicelo zakho ze-Android. Ukuza kuthi ga ngoku, siya kuba nendawo ethe kratya yokukhuphela oko sikufunayo okanye ukuthatha iifoto, ukurekhoda iividiyo okanye amanqaku. Qhubeka nokufunda!
I-Cache luhlobo lweenkumbulo ezincedisayo. Zonke iintlobo zeefayile zethutyana zigcinwe kuyo, zezo zenziwe xa siqhuba usetyenziso okanye umdlalo.
Iifayile zethutyana aziyomfuneko ekusebenzeni kakuhle kweapps, nkqu nokusebenza kwayo okulula. Nangona kunjalo, banefuthe ekuphunyezweni kwezi ngendlela elungileyo, kuba inkqubo iyazisebenzisa "ukukhumbula" ngokulula ngakumbi iinkqubo zokuziqhuba. Nangona kunjalo, xa idatha eninzi igcinwe kwi-cache, kuyacetyiswa ukuba uyicime okanye, endaweni yoko, ucime i-cache yezi zicelo.
Ungayicoca njani i-cache yezicelo kwi-Android yakho
Inkqubo yokukhulula indawo kwifowuni yakho ngokucoca i-cache yeapp Ilula kakhulu. Okokuqala, sakhankanya ukuba inokutshintsha kancinci kuxhomekeke kwimodeli yefowuni, uphawu, ulungelelwaniso ngokwezifiso kunye nohlobo lwe-Android, kunye nesigama semigaqo. Amanyathelo ekufuneka elandelwe ngala:
Kwifowuni yethu ye-Android, siya ku Cwangcisa o Useto.
Nje ukuba apho, kwicandelo le I sixhobo, siya Izicelo. Siza kuqaphela ukuba zonke iinkqubo ezifakiweyo kunye nezinto ezifakwe ngaphambili zenkqubo ziyavela.
Sikhetha usetyenziso kwaye singene Indawo yokugcina.
Ukulandela ukhetho kuya kuvela: enye yokutshintsha indawo yeapp, nokuba kukwimemori yesixhobo okanye kwi-microSD; enye ukususa yonke idatha kuyo; kwaye eyokugqibela, kulapho siza kukunika khona, ukucoca i-cache, ethi ngqo SUSA ISIKHUMBUZO.
Sincoma ukwenza le nkqubo kwisoftware nganye kwaye uyenze rhoqo, ukuze kuthintele ukuxinana kwememori yefowuni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Ungayicoca njani i-cache yezicelo kwi-Android
Ifowuni yeRazer 2 amanqaku kunye nokucaciswa
Oppo K1: uluhlu oluphakathi oluphakathi kunye nomfundi weminwe odityaniswe kwiscreen